Sharciga | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Sharciga
Jacaylka, jinsiga, internetka iyo sharcigu wuxuu dhex gali karaa siyaabo kala duwan. Hay'adda Abaal-marinta (Reward Foundation) waxay kaa caawin kartaa fahamka waxa sharcigu u leeyahay adiga iyo qoyskaaga.
Gudaha Boqortooyada Midowday, qof heysta sawirrada kacsiga galmo ee carruurta (qof kasta oo ka yar 18 sano) waxaa lagu soo oogi karaa dambi galmo. Tan waxaa ka mid ah hal dhamaadka daawashada, dadka waaweyni waxay ku dhiirigelinayeen inay raadsadaan xiriir galmo oo la yeeshaan carruurta, oo ay u sii maraan dhalinyarada u diraan una diraan qaawan ama 'qaawan' qaawan 'xiisaha jacaylka, iyo haysashada sawirrada noocaas ah.
Waxaan diirada saareynaa xaalada sharciga ee Britain, laakiin arimahan ayaa lamid ah wadamo badan. Fadlan u isticmaal boggan barta bilowga ah.
Qaybtan Qaybtan Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta (Reward Foundation) waxay sahamisaa arrimaha soo socda:
• Jacayl, Galmo, Internetka iyo Sharciga
• Warbixinta Shirka Xaqiijinta Da'da
• Da'da ogolaanshaha
• Waa maxay ogolaanshaha sharciga?
• Ogolaansho iyo dhalinyaro
• Muxuu yahay ogolaanshaha ficilka?
• Sexting hoosta sharciga ee Scotland
• Galmada galmada sida uu dhigayo sharciga England, Wales & Northern Ireland
• Yaa sameeynaya sexting?
• Aargudasho Porn
• Kacsanaanta dembiyada galmada
• Warshadaha porno
• Galmada webka